अब ६६ देशबाट नेपाल प्रवेश गर्न नपाइने । अष्ट्रेलियाबाट के हुन्छ ? सुचीसहित – Nepal Tube Australia
अब ६६ देशबाट नेपाल प्रवेश गर्न नपाइने । अष्ट्रेलियाबाट के हुन्छ ? सुचीसहित
ब्रिजवेन-कोरोना भाइरसको त्रा’स बढेसंगै नेपालले शुक्रबार मध्यरात अर्थात मार्च २१ तरिखदेखि प्रवेशमा कडाई गरेको छ ।
सरकारले यूरोप, पश्चिम एसिया, खाडीसँगै, इरान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान लगायत ६६ देशबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । यो प्रति’बन्धपछि ती देशका नागरिक मात्र नभई, त्यहा रहेका नेपाली र गैरआवासीय नेपाल कोही पनि नेपाल आउन पाउने छैनन् । अन्य देशका मानिसहरु पनि ती प्रतिबन्ध लगाइएका देशलाई ट्रान्जिट बनाएर पनि नेपाल आउन पाउने छैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रति’बन्ध बारे सुचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यूरोपका ४५ देशबाट नेपाल आउन रोक लगाइएको छ । पश्चिम एसिया र गल्फका १९ देशका साथै इरान, मलेसिया, जापान र कोरियाबाट पनि आउन पाइने छैन । प्रति’बन्धको सुचीमा नेपालीहरु धेरै बसोबास गर्ने अष्ट्रेलिया र अमेरिका भने परेको छैन ।
आफ्नै देशका नागरिकलाई स्वदेश फर्कन प्रति’बन्ध लगाएको भन्दै गैरआवासिय नेपाली संघले सरकारको निर्णयको आलोचना गरेको छ । कोरोना फैलनबाट रोक्न प्रति’बन्ध लगाएपनि आफ्नै नागरिकलाई पनि स्वदेश फर्कन नदिनु उचित नभएको संघको भनाई छ ।
यो प्रति’बन्ध लाग्दा विदेश घुम्न गएका, पढिरहेका, भिषा रद्द भएका तथा विरामी परेर घर फर्कन लागेका नेपालीहरु पी’डामा पर्ने देखिन्छ ।
एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर सरकारको यो निर्णय सच्याउन अनुरोध गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्- देशमा संक्र’मण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लिएका धेरै पहलकदमी र सतर्कता सह्राहनीय छन् । विदेशमा रहनुभएका नेपाली, खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका दिदीबहिनी, दाजुभाइका हकमा पनि सम्बन्धित देशले सुरक्षा र सतर्कताका पर्याप्त बन्दोबस्त गरेको छ–छैन भन्नेतर्फ विचार पुर्याइनेछ भन्ने अपेक्षा छ । स्वदेश फर्किन सबै प्रकारका यात्रुलाई बन्देज लगाउदा यस विषम परिस्थितिमा नेपालीहरु आफ्नै घर फर्किन नसक्ने अवस्था बनेको छ। मलाई विश्वास छ, नेपाल सरकारले संसारका कुनै पनि नेपालीलाई सहाराविहीन भएको महसूस हुन दिने छैन । यसका लागि सक्दो सहयोग र समन्वय गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ हरबखत तत्पर र नेपाल सरकारको साथमा रहेको छ। यसै सन्दर्भमा संघले माननीय गृह र परराष्ट्र मन्त्रीसित शुक्रबार छलफल गर्न लागिरहेको जानकारी समेत गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई गराउँदछु ।
नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने देशको सूचि यस्तो छ ।